Semalt: Ahoana no Hiadiana ny Spambots Toy ny Teboka-For-Website, Darodar sy ny hafa
Ny ankamaroan'ny tatitra momba ny Google Analytics dia misy tsipika momba ny fifamoivoizana, mazava ho azy avy amin'ny mpamaky. Matetika, rehefa mahatsikaritra ny fitohanan'ny fifamoivoizana ny mpampiasa, dia miezaka ny mamaky sy mametraka ny rohy referral ho tabilao vaovao amin'ny navigateur mba hametrahana ny niandohan'ny pejy web. Ny spambot dia mety hipoitra na oviana na oviana ny mpiserasera amin'ny pejy miresaka dia mahita rohy izay mivarotra SEO sy amin'ny tranonkalany tsy misy hita.
Mahatsiaro ho tsy afa-manoatra ny spambots. Mialokaloka amin'ireo mpitantana web izay tsy mahalala momba azy ireo (izay tsy mahatakatra ny fomba fiasan'ny spambots). Raha tsy misy ny antony manosika azy, dia manimba ny tranonkala iray ny tranonkala. Amin'io lafiny io, ny fifamoivoizana dia tsy maintsy mivadika raha vantany vao miseho - wd hard drive recovery.
Noho izany, i Lisa Mitchell, ilay manam-pahaizana lehiben'ny Semalt , dia mamelabelatra ny fomba fanesorana ireo spambots ao amin'ny Google Analytics.
Botin'ny soritra amin'ny Google Analytics
Io no fomba tsotra indrindra amin'ny famonoana bots amin'ny Google Analytics. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny fifamoivoizana bot dia mametraka tranonkala, ary ny Google Analytics dia tsy mahavita mitatitra ny vokany. Tokony havaozina ny singa rehefa mamorona tranonkala vaovao na manova ny kaonty Google Analytics. Izany no fomba tsotra indrindra. Ny fepetra amin'ny antsipiriany dia aseho etsy ambany:
Midira amin'ny kaonty Google Analytics.
Fidio izay fananana tokony hatao.
Ao amin'ny bokotra Admin (eo an-tampony), tsindrio ny "View Settings" eo amin'ny tampon'ny ankavanana.
Mandehana ary misafidiana ny boaty ho an'ny "Hanafika ny fitsapana rehetra amin'ny spiders sy ny botsim-pahafantarana".
Io no endriky ny sivana farany. Ny fametrahana sivana iray hanafenana ny fifamoivoizana tranonkala avy amin'ny sehatra sasany na ISP (Internet Service Provider) dia manakana ny fidirana amin'ny aterineto amin'ny ho avy tsy ho fantatra. Ny manam-pahaizana amin'ny aterineto dia mihevitra azy io ho toy ny fisainana tsy dia fahita loatra. Mbola mitety tranonkala ny spambots raha mbola mitatitra toy izany ny Google Analytics. Ny hevitra dia ny mamorona marika maromaro, ary rehefa manova ny TLD (Top Level Domains) ny spambots dia ilaina ny sivana hafa. Amin'izany, manoro hevitra ny manam-pahaizana momba ny Google Analytics ny manam-pahaizana, hatramin'ny fotoana izay hanovan'ny mpampiasa tranonkala orinasa na hamerina hamandrika ny tranokalany, tsy misy idiran-tsoratra fa efa ela no mbola ampiasaina ihany koa ny Google Analytics.
Manakana ny spambot ny teknikam-batana na dia efa tafiditra ao amin'ny baikom-piraketana voalohany eo am-piandohana aza. Ny tombontsoa lehibe amin'ity fomba ity dia ny haha-tranokalan'ny htaccess afaka mijanona ao amin'ny lahatahiry public_html an'ny tranokala iray ary manakana ny spambots amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny server. Midika izany fa mila mampiasa izany indray mandeha ny mpampiasa tranonkala maro. Ny tsy fahampian'ny htaccess dia ny tsy maintsy tadidin'ny olona iray hitondra ireo fitsipika ireo isaky ny manova hôpitaly izy ireo na mamerina pejy web izay tsy voarakotry ny rakitra htaccess teo aloha.
Ny ankamaroan'ny manam-pahaizana amin'ny aterineto dia tia mijery ity fomba ity hanakanana ny spambots. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny fomba fiasa dia miaraka amin'ny filtration serivisy maromaro (toy ny htaccess ambony) ary koa ny fomba fiasa PHP izay mampiaraka lisitra misy ny lisitra avy amin'ny lisitra miovaova indrindra amin'ny spam rehetra. Io fomba io dia mamela fotsiny ireo mpampiantrano valiny fa tsy manasaraka ny sehatra tsy fantatra.